Max Scalper EA Review - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Max Scalper EA 0
Ahịa: $ 799 (ma ọ bụ 3 ịkwụ ụgwọ nke $ 347)
Max Scalper EA Review - ọkachamara ọkachamara ọkachamara maka uru dị ala na 2016
Max Scalper EA bụ a uru dị ukwuu Forex Expert Advisor na usoro ahia zuru oke nke ejiri Doug Price (onye mepụtara Scalp Trader PRO EA) nke dị mfe iji ya na enyi ya na-amalite. Ihe mgbaàmà na-adabere na egosi na mgbakọ na mwepụ. N'ihi ya usoro a na-enye 72% nke mmeri trades.
Onye ọkachamara ọkachamara a dị mfe ịwụnye, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ị gbanwee ọnụọgụ ahịa ị nwere ike ime ya n'enweghị nsogbu.
Max Scalper EA nwere ike na-arụ ọrụ na GBPUSD Ụdị ego na 1 hour oge naanị. Na Forex robot na-eji nchikota pụrụ iche nke volatility na ụzọ ọhụụ na-agbanwe agbanwe na-azụ ahịa ahịa. Mgbe paụnd na-akụda ala nke ọwa, anyị na-aga ogologo oge. Usoro ahụ wee jiri ọwa ahụ chọpụta mgbe ị ga-apụ na ahia, na nchebe nke trailing akwụsị.
Ya mere, mgbe ọ bụla mpempe akwụkwọ na-ada n'elu ọwa ahụ, anyị na-eme mkpụmkpụ. Ọzọ - usoro ahụ ga-eji ọwa na trailing kwụsịrị iji chọpụta mgbe ị ga-apụ na ahia ahụ. Usoro ahia nwere obere ihe ize ndụ iji kwụọ ụgwọ na ịzụ ahịa dị mkpụmkpụ, na-agbanwe agbanwe, na mgbe mgbe.
Max Scalper EA were a $ 5,500 akaụntụ na-eto ya 1,422% na mgbanwe ntọala. Nke ahụ bụ ihe karịrị $ 71,000 na uru. Ọ bụrụ na a oke ego nyere unu na ụdị mmeri, na ha ga-ana gị n'etiti $ 14,200 na $ 28,400 ...
The Max Scalper EA e mepụtara site otu ọkachamara otu ndị ahịa na-achọ ịhụ gị ịga nke ọma!
Max Scalper EA --adịghị maara na Forex Trading?
Jiri nke Max Scalper EA na-atụgharị gị ego n'ime ọlaedo!
Max Scalper EA - About Trading Logic, Mbido na ndị ọzọ chọrọ
Max Scalper EA na-ejide usoro ahia nke nchebe na-achịkwa. Nke a pụtara na echedoro akaụntụ gị. Ọtụtụ ndị na-ede akwụkwọ bụ ogologo oge, nke a na-eduga n'ọdachi. Onye ọkachamara ọkachamara na-eji uru ego pụrụ iche emechi algorithm ka ọ nọgide na-emeri ahịa site na ịtụgharị gaa n'ọkwá. Algọridim a na-eji ụfọdụ ama na ntule iji chọpụta oge kwesịrị ekwesị iji gbochie uru.
a Forex EA eji a ọkaibe ụzọ ọpụpụ technology. A na-akwụsị ọnwụ na-setịpụrụ dị ka a akpachara anya, ma na-na o siri ike mgbe metụrụ n'ihi na mbụ ọzọ na-amị mkpụrụ ụzọ ọpụpụ ohere. Trade exits na-adịghị oke obere na ọ na-akpata na-usoro ikwenyere obere slippage, a nsogbu na ọtụtụ scalpers ihu.
The ọkachamara-enye Ndụmọdụ na-ekwusi a na-achịkwa gburugburu ebe obibi mgbe erekwa. Ọ ga-ahia nanị n'oge kpọmkwem volatilities, ọnọdụ, na ọnọdụ nke price ihe. Ọ bụghị random, kama ọ na-ọma gbakọọ ya ahia Ndenye na-eche nche.
Ọzọkwa nke a FX robot enye gị ohere ahia na kpọmkwem dị ize ndụ ma na-achọsi ike profitability. The trading usoro rite nnukwu uru kwa ụbọchị.
Max Scalper EA e mere maka erekwa on GBPUSD abụọ. Nkwụnye ego dị ntakịrị nwere ike ịnweta site na $ 50 maka 0.01.
E nwere nnọọ olileanya na-adịghị ize gwụsịrị na Max Scalper EA. Ndị okike nke ngwanro a na-eme ka ọnụọgụ 72% nweta ọganihu na ha ga-enyekwa nsonaazụ ndị a kwadoro.
Max Scalper EA dị na unbelievable price, ntụgharị naanị $ 799. Ya mere na-eche na jidere gị oyiri!
Gaa Leta Official Max Scalper EA website
Malite ụbọchị: June 26, 2015
Live ore: Synergy FX